समय घर्किसकेपछि पछुताएर हुनेवाला केही छैन - Pura Samachar
समय घर्किसकेपछि पछुताएर हुनेवाला केही छैन
मंसिर ५ ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लामो समयदेखि आन्तरिक द्वन्द्वले यथिवेला मुलकको राजनीतिक क्षितमा नै काला बादल मडारिएको देख्न सकिन्छ विकसित घटनाक्रमले । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले निम्ताएको महामारीको असामयिक परिस्थितिमा मुलुक हाँकिरहेको जिम्मेबार पार्टी नै मूल दायित्व बिर्सेर आन्तरिक द्वन्द्वमा केन्द्रित हुँदा आमजनतामा आक्रोश र निराशा पैदा भएको छ यतिबेला । पछिल्ला दिनमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच देखिएको आपसी वाकयुद्धले कतै पार्टी फुटको संघारमा त छैन भन्ने भान हुन थालेको छ । यद्यपि, पार्टी भित्रका दोस्रो र देस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकतालाई जोगाउनुको विकल्प नभएको भन्दै निरन्तर पहलकदमी अगाडि बढाइरहेका छन् । पार्टीं भित्रको किचलो छताछुल्ला भएर बाहिर आइरहँदा आम कार्यकर्तामा निराश बनेका छन् यतिबेला । प्रमुख दलभित्रको यो किचलो बढ्दै जादा अहिलेसम्म प्राप्त उपल्बधि नैगुम्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ अर्कोतिर । यो विषयमा नेकपा गम्भिर बन्न जरूरी छ । एउटा जिम्मेबारपार्टीले आफ्नो जिम्मेबारी बाट पछि हटनु भनेको इतिहासप्रति घोर बेइमानी हुन जान्छ । यसतर्फ सम्बन्धित जिम्मेबार पार्टीको नेतृत्वले समयमै सोच्नु आवश्यक छ ।
नेकपा भित्रको विवाद के हो ? किन विवाद भइरहेको छ ? विचार, नीति सिद्धान्तको लडाई हो कि सत्ता स्वार्थको लडाई हो ? यो कुरा नेकपाले प्रष्ट पार्नुपर्छ । देशको विकास, समृद्धि र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने विश्वासले जनताले नेकपा बन्न भन्दा अघिको गठबन्धनलाई आम निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिए, त्यो जनताको विश्वास हो । सरकारमा गएपछि जनताको विश्वासलाई कुल्चेर अघि बढनु भनेको आमजनमतको अपमान हो ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र बाम गठबन्धन गरेर चुनावमा नगएको भए बहुमत आउने थिएन । बाम गठन्धनलाई जनताले मन पराएर चुनावमा बहुमत दिएका हुन् । छुट्टा छुट्टै चुनाव लडेको भए यो बहुमत आउने कल्पना पनि थिएन । यो कुरालाई संमिक्षा गर्न जरूरी पार्टीका जिम्मेबार नेतृत्वगर्णले । पूर्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सहमतीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्न सफल भएको हो । दुई अध्यक्षबीच भएको सहमती कार्यान्वयन हुने हो भने नेकपा विवाद समाधान हुन्छ ।
अहिले दुई अध्यक्षबीच दुरी बढेको अवस्था छ । यसरी मूलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण हुन सक्दैन । हिजो जनतालाई जुन किसिमको आश्वासन दिएर सरकार बनाउने अवसर मिल्यो त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । यतिवेला नेपाली जनता नेकपा भित्रको कलह देखेर निराश छन् । जनतालाई आशा जगाउने कुनै प्रयाश हुन सकेको छैन । आम जनता कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमणबाट आक्रान्त र आतङ्कित छन् । सत्तारूढ दल नेकपा र त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकार कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने कार्यमा जुटनु पर्ने हो, यतातिर न पार्टीको ध्यान नै पुगेको छ न त सरकारको नै । जनताले गुहार माग्ने भनेको आपत वितपतको बेलामा नै हो । यस्तो आपतको बेलामा सरकारले जनतालाई कुनै वास्ता गरेको छैैन ।
सरकारलाई गाली गर्ने मेरो मनसाय होइन, सरकार सही ढङ्गले चलनुपर्‍यो भनेको हो । सत्ता स्वाथएको राजनीति छेडेर देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर भनेको हो । विगतका सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेर बाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएका हुन् । त्यो कुरा अहिले नेकपाले सरकारमा गएपछि सबै कुरा बिर्सिदिएको छ । सही ढङ्गले पार्टी र सरकार चल्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो चहाना नै हो ।
पार्टीबीचको यो विवादले नेकपालाई कता लाने हो त्यो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । समयमै समस्या समाधानतिर केन्द्रित भई भविस्यमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई बचाउने भनेको पार्टी नेतृत्वले नै हो, यसको नेतृत्व गर्नेले नै हो । अन्यथा समय घर्किसकेपछि पछुताएर हुनेवाला केही छैन । समयमै हुनसक्ने दुर्घटनाबाट बचाउनुनै कुशल नेतृत्व हो । सरकारले विगत अढाई वर्षमा गरेका काम कारवाहीप्रति पनि प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई विशेष ख्याल गरेको पनि पाइँदैन । जनचासोका विषयमा केन्द्रित हुँदै आन्तरिक द्वन्द्वलाई साम्य पार्ने मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । अन्यथा इतिहासले माफ गर्ने छैन । चेतना भया ।